Manchester United Oo Go'an Ka Gaartay Tartanka Loogu Jiro Erling Braut Haaland
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester United oo go’an ka gaartay tartanka loogu jiro Erling Braut Haaland
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inaysan haatan ku jirin tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Braut Haaland .
Xiddiga heerka caalami ee dalka Norway ayaa si weyn loo filayaa inuu ka tago BVB inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, markaasoo 63 milyan ginni lagu burburin karo qandaraaskiisa.
Man United ayaa wakhti dheer la dhacsan 21 jirkan waxana la filayay in ay u dagaalanto sidii ay u heli lahayd adeegiisa ka hor xilli ciyaareedka 2022-23.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay ESPN Manchester United ayaa ka hartay tartanka waxayna hadda eegayaan bartilmaameedyo kale oo ah seddexda ugu dambeeya ee garoonka.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda Ralf Rangnick ay rumeysan tahay in Haaland uu ku wajahan yahay Real Madrid , iyadoo kooxda Premier League ay aqbashay in Norwegian-ka uusan u dhaqaaqin Old Trafford.
Manchester City iyo Chelsea ayaa sidoo kale lala xiriirinayay da’yarkan, laakiin Los Blancos ayaa u muuqata mid ku guuleysanaysa tartanka saxiixiisa, iyadoo laga yaabo inay xagaagan la soo wareegaan Haaland iyo Kylian Mbappe .
Weeraryahanka Dortmund ayaa mar kale qaab ciyaareed heer sare ah ku soo bandhigay heer kooxeed xilli ciyaareedkii 2021-22, isagoo dhaliyay 22 gool, waxaana uu diiwaan geliyay lix caawin 19 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.